Frauenhaus Goettingen - Somali
Rabshada ka soo horjeedo haweenka waa xadgudubka xaquuqda aasaaska haweenka oo sharci ahaaan ayaa loo mamnuucay.
Haweenka waxay la dhibaatoodaan qaabab kala duwan oo rabshad ah, tusaale ahaan, xukumida, hanjabaada, liidida, xabsiyeynta, lacag u diidista, garaacida, ku xoogida dhaqamada galmada, laga mamnuucay xiriirka dadka kale, magacaabida dhoor. Dambiilayaasha ragga caadiga ahisticmaalaan awood oo ku xakameeyaan dhinaca fallalka rabshada.
Rabshada ka soo horjeedo haweenka marwalba waa rabshad ka soo horjeedo carruurta sidoo kale. Waxaa la filayaa marqaati ka noqoshada u dhaxeyso waaladiinta kaliya waa qaabka dhaawicida carruurta oo waxay u hogaamin kartaa curyaannimada dareenka, bulshada, cilmi nafsiga, iyo jirka. Waxaa jiro halis ee wareega rabshada, labadaba ee la xiriirto dhibanaha oo la xiriirto dambiilayaasha, waxay ka gudbi kartaa qarni ku qarni.
Rabshada xiriirka waa maado aan laga hadlin. Sababtaan, way adagtay in naagta ku lugleh in ay ka hadlaan waaya aragnimadooda xadgudubka. Waxay inta badan sii raagtaa xaalada sanooyin, sababtoo ah waxay dusha ka saaraan eedeynta nafsadooda badelkii dambiilayaasha masuulka ka ah. Waxay ka baqaan in lagu eedeynayo kala taga qoyska haddii ay ka saaraan nafsadooda xiriirka rabshada. Madax banaanida dhaqaalaha iyo madaxbanaanida waa in inta badan marka koowaad la gaaraa.
Ugu yaraan hal afartii haween ee ku nool Jarmalka da’dooda ah 16 ilaa 85 ee la nool ama la noolaa lamaane, waxay la kulmeen weerarka jirka iyo/ama galmada ee xiriirka lamaanaha. Ku dhawaadkii bar ka mid ah haweenka oo dhan waxay la kulmeen qaababka rabshada jirka.
Qiyaastii 45,000 haweenka iyo carruurtooda waxay raadiyaan sannad walba caawinta iyo taageerada hoyga haweenka ee Jarmalka. Hoyga Haweenka Göttingen wuxuu siiyaa la talin ee illaalada rabshada, la talinta cilmi nafsiga, iyo guri ku meel gaar ah ee qoyska ee haweenka saameysay rabshada iyo carruurtooda.
La talinta ama ogolaanshaha hoyga haweenka, na soo wac: Taleefonka 05 51/52 11 800. Waxaa nalaka soo wici karaa taleefonka maalin walba, xitaa dhammaadyada isbuuca iyo fasaxyada. Meel ka baxsan saacadaha xafiiskeena, lacala haddii uu degdeg jiro, fadlan la xiriir booliska (110).
La talinta bukaan socodka, la talinta illaalada ka soo horjeedo rabshada, iyo falanqeynta badbaadada
Waxaan siinaa warbixin tallo rabshada qoyska iyo shaqada hoyga haweenka ee bukaanada, qoysaskooda, iyo dadka taageerayo. Wada tashiga wuxuu ku dhaci karaa midkood taleefonka ama qof ahaan xafiiskeena. Wuxuu sidoo kale noqon karaa qarsoodi.
Maxaad sameyn kartaa si aad uga soo kabsatid rabshada la xiriirto xaalada masiibo? Waxa aad sameyn kartid oo nafsadaada aad ku illaalisid iyo carruurtaada? Sidee ayaad u ogaan kartaa xaquuqdaada ee jir ahaan madax banaan mustaqbalka? Waxaan ka hadleynaa xaalada halistaada gaarka ah iyo baahiyada amniga macquulka ah, tixgelinta suurtogalnimada Xeerka Illaalada Rabshada. Haddii aadan badbaado kugu haboon ku laheyn Göttingen, waxaan kugu caawineynaa meeleynta hoyga oo magaalo kale.
Taladeena waxay quseysaa qarsoodiga. Iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga cad, ma jiraan warbixin la siideynayo xisbi sadexaad.
Joogida hoyga haweenka
Haddii aad rabtid in lagaa diiwaangeliyo hoyga haweenka, waxaan weydiineynaa oo aan ka xaqiijineynaa haddii hoyga ku haboonyahay caawintaada oo hordhaca wadahadalka sharaxan ee ku saabsan sababaha ogolaanshaha.
Nasiib daro nooma suurtogaleyso in aan diiwaangelino haweenka ku tiirsan qamriga iyo daroogada, arimaha halis-ku jirka shaqsiga halis-ugu jirka waxyaabaha kale, iyo haweenka oo aan si madaxbanaan uga soo kabsan karin nololahooda joogtada ah ee hoyga haweenka.
Ciwaanka hoyga haweenka waa qarsoodi oo lama wadaagayo. Haddii ogolaanshaha la siiyo, waxaan diyaarineynaa in aan ku geyno goob dhexdhaxaad ah. La imow waraaqaha muhiimka ah iyo dukumintiyada—haddii ay suurtogal tahay—nafsadaada iyo carruurtaada.
Sababaha badbaadada laga yaabo in aysan noo suurtogalin in kugu guriyeyno iyo carruurtaada hoyga Göttingen. Xaaladaan, waxaan ku farxeynaa in aan kugu caawino helida hoy kale ee haweenka.
Hoyga haweenka wuxuu siiyaa dadka degan tallo iyo caawinta hanti helida xaalada nolosha guud sidoo kale sida la talinta dhibaatada gaarka ah. Waxaan si joogta ah u sameynaa la talinta cilmi nafsiga, taageerida xoojinta shaqsiga maalin walba, sidoo kale sida wax qabadka masiibada. Waxaan bixinaa adeegyada taageero dheeraad ah sida loogu baahanyahay.
Waxaan caawinaa xaqiijinta xaaladaada dhaqaalaha ee guriga iyo shaqada iyo la macaamilka maamulada iyo saraakiisha. Waxaan ku talineynaa kala gooniyeynta, furitaanka, haynta carruurta, iyo xaquuqda daganaanshaha iyo ku caawinta korinta xasiloon oo lagu sheegayo waaya aragnimada rabshada.
Sidoo kale, carruurta oo dhan ee ku nool guriga waxay leeyihiin xiriir go’an ee ka mid ah shaqaalaha hoyga, oo daryeelayo walaacyadooda kaas oo ka dhigayo joogitaankooda ee hoyga haweenka waayo aragnimo wanaagsan oo iyaga ah.
Shaqadeena waxaa ku dhaqmo xirfadlaha u dhawaanshaha iyo qaab laheli karo oo toos ah. Waxaan ku shaqeynaa matalaada haweenka iyo carruurtooda iyo qiimeynaa kadib baahidooda shaqsiyaadka.
Kadib joogitaanka hoyga haweenka, waxaan taageernaa daganaanshaha hore iyo carruurtooda ee helitaanka wadadooda ee xaalad ku noolaansho cusub. Waxaad sii wadi kartaa in uu kulo jiro oo kula taliyo oo ka qeybqaato barnaamijyada joogtada kooxda ee qalinjabinta. Daganaanshaha hore iyo carruurtooda waxaa taageero daryeelka dabagalka ee madaxbanaanida noloshooda iyo qaabka nolosha.
Hoyga Haweenka Göttingen wuxuu leeyahay qolka ilaa toban haween iyo carruurtooda. Naag walba waxay ku nooshahay qol. Labo qol waxaa laga heli karaa haweenka dhoor carruur leh. Hoyga wuxuu leeyahay sadex jiko bulso, qolka kooxda, qolka kulanka, qolka ciyaarta ee carruurta, iyo beerta.
Daganaanshahaan hoyga haweenka waxay ilaaliyaan nafsadooda iyo nafsada carruurtooda . Waxay go’aansadaan nolol maalmeedkooda nafsadooda oo sameeyaan go’aankooda gaarka ah. Qoyska wuxuu helaa taageerada waxbarashada iyo hay’ada ee shaqaalaha hoyga. Waxaa jiro bixinada koox joogto ah ee haweenka iyo carruurtooda. Daganaansho walba wuxuu u qaadaa waajibaadyo gaar ah qoyska. U hogaansanaanta sharciyada guriga qasab ayay u tahay dhammaan dadka dagan si markaas nolosha lagu wadaago guriga ay dhammaan raaxo u tahay.
Xiriirka: Tel.: 0551- 52 11 800